Rwisa Shanje Kuti Uve Nerugare Nevamwe | Nharireyomurindi Yekudzidza
“Ngatirambei tichiita zvinhu zvinoita kuti pave nerugare uye zvinoita kuti tivakane.”—VAR. 14:19.
RWIYO 113 Rugare Rwedu
1. Shanje dzakakanganisa sei mhuri yaJakobho?
JAKOBHO aida vanakomana vake vese, asi ainyanya kuda Josefa uyo aiva nemakore 17. Vakoma vaJosefa vakaita sei nazvo? Vakamuitira shanje, uye vakabva vatanga kumuvenga. Josefa haana chaakatadzira vakoma vake chaiita kuti vamuvenge. Kunyange zvakadaro, vakamutengesa kuti ave muranda, vachibva vazonyepera baba vavo kuti akaurayiwa nechikara. Shanje dzakaita kuti vakanganise rugare mumhuri mavo uye vashungurudze baba vavo zvisingaiti.—Gen. 37:3, 4, 27-34.
2. Maererano naVaGaratiya 5:19-21, nei shanje dzakaipa chaizvo?
2 MuBhaibheri, shanje * kana kuti godo, dzakanyorwa pamwe chete ‘nemabasa enyama’ ayo anotadzisa munhu kugara nhaka yeUmambo hwaMwari. (Verenga VaGaratiya 5:19-21.) Shanje ndidzo dzinowanzokonzera zvinhu zvakaipa zvakadai ‘sekuvengana, kupopotedzana, uye kuviruka nehasha.’
3 Zvakaitwa nevakoma vaJosefa zvinoratidza kuti shanje dzinokonzera sei ruvengo uye kuti dzinokanganisa sei rugare rwemhuri. Kunyange zvazvo tingasaita zvakaitwa nevakoma vaJosefa, tese tine mwoyo une chivi uye unonyengera. (Jer. 17:9) Ndosaka dzimwe nguva tichimboitira vamwe shanje. Tichishandisa mienzaniso yevamwe vanhu vanotaurwa muBhaibheri, ngatimboonai zvimwe zvingaita kuti shanje dzitange kudzika midzi mumwoyo medu. Tichabva tazokurukurawo dzimwe nzira dzinotibatsira kurwisa shanje, tova nerugare nevamwe.
ZVII ZVINGAKONZERA SHANJE?
4. Nei vaFiristiya vaiitira Isaka shanje?
4 Kupfuma. Isaka akanga ari mupfumi, uye vaFiristiya vaichiva upfumi hwake. (Gen. 26:12-14) Vakatofushira matsime aaichera mvura yekupa zvipfuwo zvake. (Gen. 26:15, 16, 27) Mazuva ano vamwe vanhu vanoitira shanje vaya vane pfuma yakawanda kudarika yavo sezvaiitwa nevaFiristiya. Vanoda zvinhu zvevamwe uyewo vanoda kuti vanhu ivavo vasava nazvo.
5. Chii chaiita kuti vatungamiriri vechitendero vaitire Jesu shanje?
5 Kufarirwa nevamwe. Vatungamiriri vechitendero vechiJudha vaiitira Jesu shanje nekuti aifarirwa nevanhu vakawanda. (Mat. 7:28, 29) Jesu aiva mumiririri waMwari, uye aidzidzisa chokwadi. Kunyange zvakadaro, vatungamiriri ivavo vaiudza vanhu manyepo pamusoro paJesu uye vaitaura zvakaipa nezvake kuti vasvibise zita rake. (Mako 15:10; Joh. 11:47, 48; 12:12, 13, 19) Tinodzidzei pane izvi? Tinofanira kurwisa kuti tisaitira shanje vaya vane unhu hwakanaka hunoita kuti vafarirwe neungano. Asi tinofanira kuedza kutevedzera rudo rwavanoratidza vamwe.—1 VaK. 11:1; 3 Joh. 11.
6. Dhiyotrefesi akaratidza sei kuti aiva neshanje?
6 Mabasa atinoita musangano. Panguva yevaKristu vekutanga, Dhiyotrefesi ainzwira godo vaya vaitungamirira muungano yechiKristu. Aida “kuva nechinzvimbo chepamusoro” muungano, saka aitaura zvakaipa pamusoro pemuapostora Johani uye pamusoro pedzimwe hama dzaitungamirira. (3 Joh. 9, 10) Kunyange zvazvo tisingazoiti zvakaitwa naDhiyotrefesi, isuwo tinogona kuitira shanje muKristu anenge apiwa basa rataifunga kuti tichapiwa, kunyanya kana tichiona sekuti tinokodzerawo kuita basa iroro.
Mwoyo wedu wakaita seivhu, uye unhu hwedu hwakanaka hwakaita semaruva anoyevedza. Asi shanje dzakaita sesora rinouraya zvirimwa. Shanje dzinogona kuita kuti tisava nerudo, tsitsi, uye mutsa (Ona ndima 7)
7. Shanje dzinogona kutikanganisa sei?
7 Shanje dzakaita sesora rinokanganisa zvirimwa. Kana dzangodzika midzi mumwoyo medu, zvinogona kutiomera kuti tidzibvise. Shanje dzinowedzera kana munhu aine godo, achizvikudza, uye achingofunga zvakamunakira. Dzinogona kutadzisa munhu kuti ave nerudo, tsitsi, uye mutsa. Kana tikangoona kuti shanje dzava kutanga kumera mumwoyo medu, tinofanira kubva tadzidzura. Tingarwisa sei shanje?
ZVININIPISE UYE GUTSIKANA
Tingarwisa sei shanje? Tichibatsirwa nemweya mutsvene waMwari, tinogona kudzura shanje todzitsiva nekuzvininipisa uye kugutsikana (Ona ndima 8-9)
8. Ndezvipi zvingatibatsira kuti tirwise shanje?
8 Tinogona kurwisa shanje kana tikadzidza kuzvininipisa uye kugutsikana nezvatiinazvo. Kuzvininipisa uye kugutsikana kuchaita kuti tisatanga kuva neshanje mumwoyo medu. Kuzvininipisa kuchaita kuti tisanyanya kuzvikoshesa. Munhu anozvininipisa haaoni sekuti anofanira kuwana zvinopfuura vamwe vese. (VaG. 6:3, 4) Munhu anogutsikana anofara nezvaainazvo uye haazvienzanisi nevamwe. (1 Tim. 6:7, 8) Munhu anozvininipisa uye anogutsikana nezvaainazvo anofara mumwe munhu paanowana zvinhu zvakanaka.
9. Maererano naVaGaratiya 5:16 uye VaFiripi 2:3, 4, mweya mutsvene uchatibatsira kuti tiitei?
9 Tinotoda kubatsirwa nemweya mutsvene waMwari kuti tisava neshanje, tova vanhu vanozvininipisa uye vanogutsikana nezvavainazvo (Verenga VaGaratiya 5:16; VaFiripi 2:3, 4.) Mweya mutsvene waJehovha unotibatsira kuti tiongorore zviri mumwoyo medu uye vavariro dzedu. Tichibatsirwa naJehovha, tinogona kubvisa pfungwa dzakaipa uye shanje, tozvitsiva nemafungiro akanaka. (Pisarema 26:2; 51:10) Funga nezvaMozisi naPauro, varume vakabudirira pakurwisa shanje.
MuIsraeri wechidiki amhanya kuna Mozisi naJoshua kunovaudza kuti pane varume vaviri vari kuita sevaprofita mutende. Joshua anokumbira Mozisi kuti avarambidze zvavari kuita asi Mozisi ari kuramba. Anoudza Joshua kuti ari kufara kuti Jehovha aisa mweya wake pavarume vacho (Ona ndima 10)
10. Chii chaigona kuita kuti Mozisi ave neshanje? (Ona mufananidzo uri pakavha.)
10 Mozisi aiva nesimba chaizvo pakati pevanhu vaMwari, asi haana kuedza kuita kuti vamwe vasariwana. Semuenzaniso, Jehovha akambobvisa mumwe mweya wake pana Mozisi, akauisa pavakuru vechiIsraeri vainge vakamira pedyo netende rekusanganira. Izvozvo zvichangobva kuitika, Mozisi akazonzwa kuti vamwe vakuru vaviri avo vainge vasina kuenda kutende rekusanganira vainge vagamuchirawo mweya mutsvene vachibva vatanga kuita sevaprofita. Akaita sei Joshua paakamuti arambidze vakuru vaviri ivavo kuprofita? Haana kuvaitira shanje nekushandiswa kwavaiitwa naJehovha. Asi akafara nekuti vainge vava kuprofita. (Num. 11:24-29) Tinodzidzei kubva pane zvakaitwa naMozisi?
Vakuru vechiKristu vangazvininipisa sei saMozisi? (Ona ndima 11-12) *
11. Vakuru vangatevedzera sei Mozisi?
11 Kana uri mukuru, wakambokumbirwa here kuti udzidzise mumwe munhu kuti aite rimwe basa raunoda chaizvo muungano? Semuenzaniso, unogona kunge uchida chaizvo ropafadzo yako yekuitisa Chidzidzo cheNharireyomurindi vhiki rimwe nerimwe. Kana uchizvininipisa saMozisi, hauzonzwi sekuti hauchakoshi kana ukakumbirwa kuti udzidzise mumwe munhu kuti azokwanisawo kuita basa racho. Asi uchabatsira hama yako uchifara.
12. VaKristu vakawanda vari kuratidza sei kugutsikana uye kuzvininipisa?
12 Chimbofunga zviri kuitika kune dzimwe hama dzakura. Dzakashumira sevarongi mumatare evakuru kwemakore akawanda. Asi padzinosvitsa makore 80, dzinobvuma kusiya basa iroro dzichifara. Vatariri vematunhu vanenge vasvitsa makore 70 vanobvuma kusiya basa iroro, voenda kunoita rimwe basa ravanenge vapiwa. Uye mumakore achangopfuura, vakawanda vaishumira paBheteri pasi rese vava kushumira mundima. Hama nehanzvadzi idzi dzakatendeka hadzigumbukire vaya vanenge vapiwa mabasa adzaimboita.
13. Chii chaigona kuita kuti Pauro aitire shanje vaapostora 12?
13 Muapostora Pauro akaratidzawo muenzaniso wakanaka wekugutsikana uye kuzvininipisa. Pauro haana kumboitira vamwe shanje. Akashanda nesimba muushumiri asi akati: “Ndiri mudiki pavaapostora vese, uye handina kukodzera kunzi muapostora.” (1 VaK. 15:9, 10) Vaapostora 12 vakafamba naJesu paaiita ushumiri hwake pasi pano, asi Pauro akazova muKristu Jesu atofa uye amutswa. Kunyange zvazvo akazova “muapostora kune mamwe marudzi,” Pauro haana kuwana ropafadzo yekuva mumwe wevaapostora 12. (VaR. 11:13; Mab. 1:21-26) Pane kuitira shanje vaapostora 12 nekuti vaiva shamwari dzaJesu dzepedyo Pauro akagutsikana nezvaaiva nazvo.
14. Tichaitei kana tichigutsikana uye tichizvininipisa?
14 Kana tichigutsikana uye tichizvininipisa, tichatevedzera Pauro, toremekedza vanhu vanenge vapiwa simba naJehovha. (Mab. 21:20-26) Jehovha akaita kuti pave nevakuru vanotungamirira muungano yechiKristu. Kunyange zvazvo vari vanhu vanotadza, Jehovha anoti varume ivavo “zvipo.” (VaEf. 4:8, 11) Patinoremekedza varume ivavo vakagadzwa, tichivateerera, tinoramba tiri pedyo naJehovha uye tinova nerugare nevamwe vaKristu.
‘RAMBA UCHIITA ZVINHU ZVINOITA KUTI PAVE NERUGARE’
15. Zvii zvatinofanira kuita?
15 Kana tiine shanje hatigoni kuva nerugare nevamwe. Tinofanira kudzura shanje mumwoyo medu, uye hatifaniri kuita zvinhu zvinoita kuti vamwe vave neshanje. Tinofanira kutora matanho iwayo anokosha kana tichida kuteerera murayiro uyu waJehovha wekuti tirambe “tichiita zvinhu zvinoita kuti pave nerugare uye zvinoita kuti tivakane.” (VaR. 14:19) Zvii zvatingaita kuti tibatsire vamwe kuti varwise shanje, uye tingaitei kuti tive nerugare nevamwe?
16. Tingabatsira sei vamwe kuti vasava neshanje?
16 Maonero edu uye maitiro edu anogona kubatsira vamwe kana kuvakanganisa. Nyika inoda kuti ‘tishamisire’ nezvinhu zvatiinazvo. (1 Joh. 2:16) Asi izvozvo zvinomutsa shanje. Tinogona kuita kuti vamwe vasava neshanje kana tikasagara tichitaura nezvezvinhu zvatiinazvo kana kuti zvatiri kuda kutenga. Maitiro edu kana tiine ropafadzo muungano anogona kubatsira vamwe kuti vasava neshanje. Kana tikagara tichitaura nezvemabasa atiri kuita muungano, tinogona kuita kuti vamwe vave neshanje. Asi kana tikaratidza kuti tinofarira vamwe, tichibvuma kuti vane zvakanaka zvavari kuita, tinovabatsira kuti vagutsikane uye tinoita kuti muungano muve nekubatana uye rugare.
17. Vakoma vaJosefa vakakwanisa kuitei, uye nei vakakwanisa kuita izvozvo?
17 Tinogona kukunda muhondo yedu yekurwisa shanje! Funga zvakare muenzaniso wevakoma vaJosefa. Papera makore kubva pavakaitira Josefa utsinye, vakaonana naye muIjipiti. Josefa asati audza vakoma vake kuti aiva ani, akavaedza kuti aone kuti vainge vachinja here. Akaita kuti vadye pamwe chete, uye akapa mudiki pane vese, Bhenjamini, zvekudya zvakawanda kupfuura zvaakapa vamwe. (Gen. 43:33, 34) Asi hapana chinoratidza kuti vakoma vake vakaitira Bhenjamini shanje. Pane kudaro, vakanyatsoratidza kuti vaida munin’ina wavo uye baba vavo Jakobho. (Gen. 44:30-34) Sezvo vakoma vaJosefa vakanga vasisina shanje vakakwanisa kuita kuti mumhuri mavo muvezve nerugare. (Gen. 45:4, 15) Kana isuwo tikadzura shanje mumwoyo medu, tichaita kuti mumhuri uye muungano medu muve nerugare.
18. Maererano naJakobho 3:17, 18, chii chinoitika kana tikaita zvinhu zvinoita kuti pave nerugare?
18 Jehovha anoda kuti tirwise shanje uye tiite zvinhu zvinoita kuti pave nerugare. Tinofanira kushanda nesimba kuti tiite zvinhu zviviri izvozvo. Sezvakurukurwa munyaya ino, zviri nyore kuti tive neshanje. (Jak. 4:5) Uye tiri munyika inoita zvinhu zvinomutsa shanje. Asi kana tikashanda nesimba kuti tizvininipise, tigutsikane, uye tifarire zvinoitwa nevamwe, hatizovi neshanje. Asi tichava vanhu vane rugare nevamwe, vane rudo, vane tsitsi uye vane mutsa.—Verenga Jakobho 3:17, 18.
Mweya mutsvene unotibatsira sei kurwisa shanje?
Kugutsikana uye kuzvininipisa kunotibatsira sei kurwisa shanje?
Kuva kwedu nemaonero akanaka kunobatsira sei vamwe kurwisa shanje?
^ ndima 5 Musangano raJehovha mune rugare. Asi rugare irworwo runogona kukanganiswa kana tikatanga kuva neshanje. Munyaya ino, tichakurukura zvinhu zvinokonzera shanje. Tichakurukurawo kuti tingarwisa sei shanje uye kuti zvii zvatingaita kuti tive nerugare nevamwe.
^ ndima 2 KUTSANANGURWA KWESHOKO: Sezvinoratidzwa neBhaibheri, shanje dzinogona kuita kuti munhu ade zvinhu zvine vamwe uyewo ade kuvatorera zvavainazvo.
^ ndima 61 KUTSANANGURWA KWEMIFANANIDZO: Pamusangano wevakuru, hama yechikuru inoitisa Chidzidzo cheNharireyomurindi inokumbirwa kuti idzidzise mukuru wechidiki kuti aitise chidzidzo chacho. Kunyange zvazvo mukuru wacho achida basa rake, anotsigira nemwoyo wese chisarudzo chevakuru, uye anopa hama yacho yechidiki mazano anobatsira uye anoirumbidza nemwoyo wese.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Rwisa Shanje Kuti Uve Nerugare Nevamwe